Lova faritany fahavalo: mpanjifa / mpizara lozisialy fahavalo Wolfenstein | Avy amin'ny Linux
Lova faritany fahavalo: mpanjifa / mpizara lozisialy fahavalo Wolfenstein
Betsaka amintsika no nilalao ilay malaza lalao video shooter olona voalohany antsoina hoe Wolfenstein: faritry ny fahavalo, tsy isalasalana fa benchmark ao amin'ny faritry FPS. Fifaliana be no tonga tamiko rehefa hitako fa misy tetikasa loharano misokatra iray izay namolavola mpanjifa sy mpizara iray antsoina hoe Lovan'ny faritry ny fahavalo izay mifanaraka tanteraka amin'ny Wolfenstein: faritry ny fahavalo, mitazona ity lalao mahafinaritra ity ho velona sy vaovao.
1 Inona ny lova navelan'ny fahavalo?
2 Ahoana ny fametrahana ny lova avy amin'ny fahavalo?
3 Mifandraisa amin'ny mpizara lovan'ny Teritery fahavalo?
Inona ny lova navelan'ny fahavalo?
Lovan'ny faritry ny fahavalo dia tetikasa open source, izay mandray ny kaody loharano an'ny lalao FPS malaza antsoina hoe Wolfenstein: faritry ny fahavalo mitazona izany mba hanitsiana ny lesoka, esory ny fiankinan-doha tsy tanteraka ary avelao ny lalao hiasa tsara amin'ny rafitra fiasa rehetra nefa tsy very ny mifanentana amin'ny kinova ET 2.60b, ankoatry ny famelana ny fampidirina amina maro mods izay manatsara ny filalaon'ny Terrain'ny fahavalo.
Amin'ny ankapobeny, ity tetikasa ity dia manampy endrika sy fitaovana maro, fa manandrana tsy misy fiatraikany amin'ny fitsipiky ny lalao voalohany. Izany rehetra izany dia mifandraika amin'ny fahalianana matanjaka amin'ny fanaovana ny jiro fampiharana ary lasa zava-misy izany Lua fandaharana fandaharana.
Afaka mahafantatra bebe kokoa momba ity lalao tsara ity isika amin'ny lalao manaraka
Ahoana ny fametrahana ny lova avy amin'ny fahavalo?
Ny fametrahana ny fahavalo faritany fahavalo dia tena tsotra amin'ny distro Linux rehetra, mandehana fotsiny amin'ny pejy fisintomana ofisialy avy amin'ireto manaraka ireto rohy, ary andao ampidino ny tsimbadika farany misy.
Avy eo amin'ny terminal dia mankany amin'ny lahatahiry izay namoahanay ny kinova farany an'ny Enemy Territory Legacy ary manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay, manolo ny anaran'ny fonosana nofidininao.
Tokony hanaiky ny fahazoan-dàlana isika, ary milaza izany bebe kokoa si rehefa misafidy ireo fiankinan-doha ilaina amin'ny fametrahana marina ny Terrain'ny fahavalo, ankoatry ny fankatoavana ny lahatahiry default amin'ny fampiharana.
Miaraka amin'izany, hanana Enemy Territory Legacy napetraka isika hahafahana mifandray amin'ny mpizara rehetra, haingana sy mora.
Mifandraisa amin'ny mpizara lovan'ny Teritery fahavalo?
Aorian'ny fametrahana ny Enemy Territory Legacy, afaka mifandray amin'ny mpizara maimaim-poana amin'ity lalao ity isika, na dia ny ekipan'ny fampandrosoana aza dia manana ekipa fitsapana izay azonao ampifandraisina amin'ireto fomba manaraka ireto:
Azonao atao ny mihazakazaka ny fahavalo faritany fahavalo ary avy eo ny fampiharana fampiharana mampiditra ity baiko manaraka ity /connect etlegacy.com
Azonao atao ihany koa ny mihazakazaka ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny fifandraisana misy mpizara miaraka amin'ity baiko manaraka ity: ./etl +connect etlegacy.com
Ny lisitry ny mpizara Teremy dia azo jerena Eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Lova faritany fahavalo: mpanjifa / mpizara lozisialy fahavalo Wolfenstein
Sendra ny fantsona telegram-tranonkala https://jugandoenlinux.com/ mikarakara lalao multiplayer miaraka amin'ny lalao linux izahay ary tamin'ity herinandro ity dia nivoaka ny etlegacy.
Raha misy ampirisihina handray anjara dia mandeha amin'ny telegram isika https://t.me/jugandoenlinux
Salama, manana olana amin'ny filalaovana MAC aho.
Aiza no hividianana singa elektronika an-tserasera?
Ahoana ny fampiasana Open English amin'ny Linux miaraka amin'ny Chromium